Turkiga iyo Gariiga oo sameenaya Dhoolo tus sababi kara in ay isku dhacaan | Dhexnimo Media
Home Wararka Turkiga iyo Gariiga oo sameenaya Dhoolo tus sababi kara in ay isku...
Turkiga iyo Gariiga oo sameenaya Dhoolo tus sababi kara in ay isku dhacaan
Dowladaha Turkiga iyo Gariiga oo xiligan xiisad siyaasadeed u dhaxeyso ayaa labadaba ku dhawaaqay in ay sameenayaan dhoolo tus milatari oo sababi kara in ay isku dhacaan ciidamada labada dal.
Labada dal oo khilaafkooda sii xumaanayay ayaa ku dhawaaqay in dhoolo tus milatari ka sameenayaan jaziirada Crete, waxaana labada dal doonayaan in dhoolo tuska kusoo bandhigaan awoodooda ciidan.
Dowlada Turkiga ayaana digniin xoogan u dirtay Maraakiibta Gariiga ee ku sugan aaga Jaziirada Crete, waxaana jirta cabsi laga qabo in dhoolo tuskan labada ciidan sameenayaan uu sababao gacan ka hadal.
Turkiga iyo Griigga oo ah laba dal oo daris ah sidoo kalw ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa haatan isku khilaafsan Saliidda iyo Gaaska Turkiga ka helay inta u dhaxeeysa Jaziiradaha Crete iyo Khubrus.
Wasiirka arimaha Dibadda Jarmalka ayaa lagu wadaa in maanta tago dalalka Gariiga iyo Turkiga si uu labada dal ugala hadlo sidii loo qaboojin lahaa xiisada taagan wadahadala loogu dhameyn lahaa xiisada labada dal u dhaxeysa.
Dowladaha Turkiga iyo Giriiga ayaa ku loolamaya keydka Gaas islamarkana waxay isku khilaafsan yihiin cidda xaqqa u leh goobo muhiim ah oo ku yaalla bariga badda Mediterranean-ka .
Previous articleAxmed Madoobe iyo Siyaasiyiin la socotay oo lagu soo dhaweeyay magaalada Garawe
Next article5 Qalad Oo Dila Kombiyuutarka Laptop-ka